တွေးနိုင်သလောက်တွေးပါ ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
နိုင်ငံတော်သမ္မတအကြံပေးများ၏ CSIS (Center for Strategic and International Studies) မဟာဗျူဟာ နှင့် နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးဌာနမှ ဖွင့်လှစ်သော နိုင်ငံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းတွင် ဘာသာရပ် (၁၅) ခုအပြင် အတွေး အခေါ်ကို အခြေခံသည့် သဘောတရားရေးများကို မျှဝေပို့ချနေပါသည်။ ရဲရဲတွေး၊ ရဲရဲပြောစေပါသည်။ ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံ သားတို့ အဓိကရင်ဆိုင်နေရသော စိန်ခေါ်မှုမှာ သဘောတရားရေးပြဿနာ (Conceptual problem) ဖြစ်သည်။ ရှုမြင်မှု၊ခံယူမှု မှားယွင်းရာမှ အယူအဆတို့ မှားယွင်းရခြင်း ဖြစ်သည်။ အယူအဆ၊ သဘောတရားများ မှားယွင်းလျှင် ဆောင်ရွက်ပုံဆောင်ရွက်နည်းတို့ လွဲချော်ရပါသည်။ သဘောတရားရေးရာ မှားယွင်းမှုမှာလည်း တွေးခေါ်မှု အားနည်းသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အတိုဆုံးသောတွန်းအားအဖြစ်…
အမေရိကန်တို့၏ တွေးခေါ်မှုမှ သန္ဓေတည်မွေးဖွားသော တီထွင်ဆန်းသစ်မှုကို အခြားတိုးတက်သောနိုင်ငံများ က လိုက်မမီချေ။ စင်္ကာပူပင်လျှင် လက်ဖျားခါသွား၏။ အတွေးများအားကောင်းလာလျှင် အဆင့်ဆင့် တိုးတက်လာပြီး တီထွင်မှုပါတွေးခေါ်မှု (Creative thinking) ကိုရရှိမည် ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအပြင်၊ နည်းပညာ မဟာ ပေါက်ကွဲမှုဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်နေရသောခေတ်ကြီးတွင် တီထွင်မှုပါတွေးခေါ်မှုမရှိခဲ့လျှင် သူများရှေ့ရောက်ရန် မဖြစ်နိုင်ချေ။ တွေးတောခြင်းမှ အခြေခံသော တီထွင်မှုပါတွေးခေါ်မှုသည် ယနေ့ခေတ်သစ်တွင် မရှိမဖြစ်အရာဖြစ်လာပြီး၊ competency ဟူသော ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း၏ အခြေခံအရည်အချင်းလည်း ဖြစ်လာသည်။
အစဉ်အလာတွေးခေါ်မှုသည် ခေတ်သစ်တွင် နေရာမရှိတော့ချေ။ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုပါ တွေးခေါ်မှုက အစားထိုးနေရာယူပြီးသွားပြီ ဖြစ်သည်။ တစ်ဦးတည်း၏ တွေးနိုင်သမျှ အတွေးသည် တစ်စုံတစ်ရာအထိ ခရီးရောက် ပါသော်လည်း၊ အခြားသူများနှင့် ဖလှယ်တွေးသည် ပို၍ခရီးရောက်၏။ သူ့အတွေးကြောင့် ကိုယ်ကအတွေးသစ်တစ်ခု ရလာသလို၊ ကိုယ့်အတွေးကို ထုတ်ဖော်ရာမှသူလည်း အတွေးသစ်ရလေ့ရှိ၏။ အတွေးနှစ်ခု ပူးပေါင်းရာမှ ပို၍ ကောင်းမွန်သော အတွေးသစ်တို့ကိုလည်း ထုတ်လုပ်ပေးပြန်ပါသည်။
များများတွေး၊ ဝေးဝေးတွေးခြင်းအားဖြင့် တဖြည်းဖြည်း အနာဂတ်အမြင် သန်စွမ်းလာပါသည်။ အကျိုးကျေးဇူး များကိုလည်း ရရှိလာနိုင်ပါသည်။ တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ ပတ်ချုံဟီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ ဆောင်ရွက်စဉ် အထည်အလိပ်ကို အခြေခံသော Samsung ကို အီလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီကြီးအဖြစ် အတင်းအကျပ် ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ သည်။ ထိုစဉ်က ခါးသီးသောအတွေ့အကြုံများကို ဖြတ်သန်းခဲ့သည့် Samsung မှာ တစ်ပိုင်း လျှပ်ကူးထုတ်လုပ်မှုတွင် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးထုတ်လုပ်သူဖြစ်လာခဲ့ပြီး များစွာအကျိုးအမြတ်များရရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်း ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူများ ၏ တွေးအားကောင်းမှု၊ အနာဂတ်အမြင်သန်စွမ်းမှုတို့ကြောင့် လက်ကိုင်ဖုန်းများထုတ်လုပ်မှုတွင် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး NOKIA ကို ကျော်ဖြတ်ကာ နံပါတ် (၁) နေရာသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပေသည်။ ကြီးမားသော အကျိုးကျေးဇူးများ၏ အခြေခံသည် “တွေးနိုင်သမျှတွေးခဲ့ခြင်း” မှအစပြုလာခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
တီထွင်မှုပါ အတွေးအားကောင်းသူများ၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကောင်းသူများကြောင့် ကုမ္ပဏီများ အကျိုးအမြတ် ကြီးစွာ ရကြသည်ဖြစ်၍ ထိုထက် ပိုတွေးသူများက ဦးနှောက်ဖောက်စားမှုပြုလာကြသည်။ Head hunter ဟူသော ဦးနှောက် ဖောက်စားသူများက ကုမ္ပဏီကို အကျိုးအမြတ် အကောင်းဆုံးရှာဖွေပေးနိုင်သည့် CEO များကို ရှာဖွေကြတော့သည်။ ကြိုက်ဈေးပေး၍ ကုမ္ပဏီများကူးပြောင်းစေပြီး လုပ်ငန်းတာဝန် ထမ်းဆောင်စေသည်။ ဤဖြစ်ရပ်က ရိုးစင်းသော်လည်း Head hunter များ၏အတွေးက ပို၍ခရီးရောက်သည့်သဘော ဖြစ်လာသည်။
မကြာသေးမီက (၁၉. ၁၁. ၁၂) က အမေရိကန်သမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမား မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့ပြီး၊ ရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်တွင် မိနစ် (၃ဝ) ကြာ မိန့်ခွန်းပြောသွားသည်၊ အမေရိကန်တို့ တိုးတက်ရခြင်းမှာ ပညာရေး ကြောင့်ဟုလည်း ဆိုသွားသည်၊ ပညာရေးကို ကောင်းသထက်ကောင်းအောင်၊ ထက်သထက်ထက်အောင် တွေးခေါ်ကြရ ၏။ သင်ရိုးသစ်များ ရေးဆွဲကြ၏။ အတွေးအခေါ်သစ်၊ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်အသစ်များကို ထည့်သွင်းသင်ကြားကြ၏။ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဆောင်ရွက်ရမည် ဟူသောအတွေးကို အမေရိကန်တို့ လက်ခံကြ၏။ သို့နှင့် အမေရိကန်တို့သည် ကမ္ဘာကြီးကို နှစ်ပေါင်း (၇ဝ) ကျော်ကြာ ဦးဆောင်နိုင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်တို့၏ ပညာရေးသင်ကြားမှုစနစ်သည် ကျောင်းသားကျောင်းသူတို့ကို တွေးခေါ်မှု အားကောင်းစေ သည်၊ သဘောတရားကို ပြည့်ဝစွာပေးသည်၊ တစ်အပေါင်းတစ်၏ ညီမျှခြင်းတစ်ဖက်တွင် "နှစ်" ရသည်ဟူသည့် အဖြေ ထက်၊ "ပေါင်း" ခြင်း၏သဘောတရား၊ "နှုတ်" ခြင်း၏သဘောတရား၊ "မြှောက်ခြင်း" "စားခြင်း" ၏သဘောတရားကို ပို၍ ဦးစားပေးသင်ကြားသည်၊ အတွေးများများရစေရန် ကျောင်းသားများကို စာကြည့်တိုက် များများထိုင်စေသော သင်ကြား နည်းကို အခြေပြုသည်။
အစဉ်အလာခေတ်သည် ယဉ်ကျေးမှုမှတစ်ပါး ထိန်းသိမ်းရန်မဟုတ်တော့ပါ၊ အစဉ်အလာအတွေးအခေါ်များကို လည်း စွန့်လွှတ်နိုင်ကြရန်ဖြစ်သည်။ သမိုင်းသစ်၊ စာမျက်နှာသစ်သို့ ရောက်လာသော မြန်မာနိုင်ငံသားများမှာ အတွေးသစ်၊ အမြင်သစ်တို့ကို ရယူနိုင်ကြရန်လိုပါသည်။